Xisbiga Waddani Oo Soo Bandhigay Dariiqa Uu U Marayo Ictiraaf Raadinta | Berberatoday.com
Xisbiga Waddani Oo Soo Bandhigay Dariiqa Uu U Marayo Ictiraaf Raadinta
May 27, 2017 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani ayaa soo bandhigay qorshaha iyo dariiqa ay u marayaan Ictiraaf raadinta Somaliland marka ay ku guulaystaan hogaaninta talada dalka.
Dr Maxamed Cismaan Fadal, xoghaya arimaha dibada ee xisbiga Waddani oo qorshayaashaasi Ictiraaf raadinta faahfaahinayaana waxa uu ku bilaabay hadalkiisa oo uu yidhi “Somaliland way ka weyntahay 26 sanadood, waa dal sida dalalka aduunka u samaysmay xornimadiisana qaatay, taariikh aynu wada garanaynana leh.
Somaliland ilaa maanta waynu ognahayoo iyadoo qaran ah oo shaqaysa oo dadkeeda iyo dunidaba anfacda, hadana dalalka aduunka si loola macaamilo ictiraaf kamay helin.
Xukuumada Waddani ee iman doontaa dariiqeebay u maraysaa inay ictiraafkaa iyo aqoonsigaa caalamka ee ilaa maanta ay ku guulaysan waayeen dawladihii hore ee soo maray dalkan dariiqeebay u maraysaa.
Somaliland waa dal xor ah oo taariikhdeeda 26-kii June 1960-kii xor noqday, 18-kii May-na la soo noqday xornimadiisa iyo madaxbanaanidiisa, ictiraafkuna waa wax la heli karo loona hawlgali karo.
Ictiraafka Somaliland waxa uu Waddani u marayaa laba waddo oo uu u jeexanayaa, wadada koowaad oo ah inuu dalka gudihiisa hagaajiyo, inuu midnimadiisa hagaajiyo, inuu qawaaniintiisa hagaajiyo, inuu ummadda noloshooda hagaajiyo oo dal aduunka u dhigma oo laga karaameeya noqon kara iyo ta labaad oo ah jid caalamka ictiraafku ku xidhan yahay iyo sida loola macaamilayo.
Guddaha waxa inoo yaala marka Waddani xukunka yimaado, wuxuu qabanayaa shir balaadhan oo umadda Somaliland uu isugu keeno oo dibad iyo gudaba maskaxdooda, cilmigooda iyo caqligoodaba ay ku shiilaan oo ku qotoma wadatashiga siyaasada oo ah xisbiga waddani oo lagaga tashanayo ilaa iyo 26-kii sanadood ee aynu isku soo dayeynay inaynu ictiraaf helno maxaa inaga khaldamay, maxaa inagu adkaaday, halkaynu uga gudbaynaa dariiqa dhaw iyo dariiqa dheer ee aynu u jeexanaynaa waa maxay? Waxaynu ognahay ilaa maanta siyaasad tifaftiran oo dad iyo dawladba la isku ogyahay oo dawladdu soo bandhigtay gaar ahaan dawladdan Kulmiye soo bandhigay haba yaraatee ma jirto, qodobka lagu bilaabo ayuu noqonayaa.
Waxa aynu ku xigsiinaynaa, ururinta, aqoonta iyo tacabka loo galay inay soo ururino oo Mac-had arintaa ka shaqeeya oo siyaasadaa ku xidhan isagana u samayno oo dibad iyo gudaba caqligeena dad iyo dawladba aynu isugu gayno oo cilmi baadhis inoo sameeya oo aduunkana la xidhiidha.
Waxa aynu gudaha ku xigsiinaynaa inaynu ka tashano oo Xukuumada Waddani ay go’aan ka soo saarto wadahadalka aynu Somalia la leenahay ee madhalayska ahi macno ma leeyahay in la sii wado, labada dal iyo labada dal wax anfacaya ma laga soo saari karaa, taana mudo lix bilood ah ayay xukuumada Waddani go’aan kaga gaadhaysaa hadii wadahadalkaasi wax faa’iido ah inoo yeelanayo iyo hadii ay wakhti lumis tahayba.
Waxaynu ku xigsiinaynaa in qarankeenu noqdo qaran qaynuunka lagu xukumo oo dawladaha adduunka iyo qaramada aduunka la mid ah oo qaynuunka aan cidi ka saraynin oo qaynuunku dadka u wada siman yahay oo dawladd madax iyo mijo qaynuunku wadaqabto oo lagu dhaqmo oo la wada xoojiyo hay’adaha sharciga inoo ilaaliya iyo kuwa inoo sameeyaba lana xoojiyo lana karaameeyo.
Waxaynu ku xigsiinaynaa inaynu dunida u muujino inaguna xaqiijino dadka reer Somaliland daafaha dalka gobaladiisa iyo shucuubtiisa iyo qabaa’ilkiisa iyo cid waliba inay u siman tahay Khayraadkiisa, Kuraasta, iyo waxa dhulka ku jira iyo waxa laga soo saaro in aanay meel iyo laba toosan ku koobnaanine qaranku u siman yahay, dadkuna siday u kala liitaan ee ay u kala dambeeyaan waliba loogu kala roonaado oo gobolada bari loo roonaado.
Waxaynu ku xigsiinaynaa inaynu muujino inaguna isku muujino aduunkana u xaqiijino in Musuqmaasuqu xaaraan ka yahay xukuumada Waddani iyo dawladd Somaliland ahba.
Musuqmaasuqu wuu dilaa koriinka, wuu dilaa karaamada, wuu dilaa dadka niyadiisa (zero tolerance) waxa la yidhaahdo ayay xukuumada Waddani u yeelanaysaa waxa la yidhaahdo Musuqmaasaqa, wax alaale iyo wixii lagu xakamaynayo, waxa aad ka arki doontaan barnaamijka xisbiga.
Waxaynu Xaqiijin doonaa Xoriyadda Saxaafada iyo Xoriyatul Qawlka iyadoo sharciga lagu dhaqmayo oon saxaafadna la iska xidhxidhi karin iyadoo qarankooda u shaqaynaya oo shaqadooda haysata. Xisbiyada Qarankana aan la xidhi karin iyagoo xaqooda distooriga ah samaysanaya sida maanta dhacday ee ay jeelalka ku jiraan, xukuumada Waddani caadadaasi maaha caado laga filayo way baabiinaysaa, cidii ku kacda ee dawladda ah ee ku tacadida dadkana sharciga dadka ayay ula siman tahay.
Waxa kale oo qaybtaa gudaheeda aan ku soo gabogabaynayaa, Doorasho dib u dhici doonta, iyo doorasho Guurti iska korkordhin doontaa midna ma jiri doonto, doorashada inagaa qabsanayna, lacagteeda inagaa bixinayna, wakhtigeeda ayaa lagu qabanayaa.”